Shirkadaha korontada Burco oo ku midoobay hal shirkad. - Wargeyska Faafiye
.Warka, Faafiye Latest news.
Shirkadaha korontada Burco oo ku midoobay hal shirkad.
Shirkadaha ganacsiga korontada ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ku midoobay hal shirkad oo kaliya.
Shirkadaha Kaah, Beder, City Plaza iyo Somtel ayaa la magac baxay Whole Electric Company ( WHECO), sida uu sheegay maareeyaha shirkadda, Khadar Jibriil oo tilmaamay inay u midoobeen sidii ay magaalada u siin lahaayeen dab ammaan ah, qiimihiisu jaban yahay, lehna tayo iyo adeeg wanaagsan.
Mas’uuliyiin kale oo ka tirsan midowga shirkadaha korontada ayaa iyaguna sheegay in ay dhimi doonaan kala bar qiimaha korontada ee xilligan.
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland, ganacsato iyo dadweyne ka hadlay goobta ayaa iyaguna ka codsaday shirkadda in ujeeddada midowgu aysan noqon mid keenta sicir barar dhinaca korontada ah, taas oo mas’uuliyiinta shirkaduhu ay ballanqaadeen inaysan dhici doonin.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsShariif Xasan: Dib u dhaca dastuurkaBoehner pushes long-term spending to avoid shutdown fightGaroowe: Guryo loo dhisay barakacayaal.David Angell Canada's First Ambassador To Somalia In 20 YearsAskari DF ah oo lagu toogtay Bakaaraha.